ဒူဒူကြီး: "Rooling Bearings"
rolling bearings တွေကို radial rolling bearing အုပ်စု နဲ့ thrust rolling bearing အုပ်စုဆိုပြီး (၂) အုပ်စုမျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ 'radial rolling bearing' အုပ်စုကို၊ ball bearing နဲ့ roller bearing ဆိုပြီး ထပ်မံခွဲခြားပါတယ်။
Fig. radial bearing - ball bearings
'radial rolling bearing' အုပ်စုမှ 'ball bearings' တွေမှာ deep groove ball bearing, maximum type ball bearing, magneto bearing, angular contact ball bearing နဲ့ self-alignment ball bearing တို့ပါဝင်ပြီး၊ angular contact ball bearing ကို single row နဲ့ double row ဆိုပြီး ထပ်မံခွဲခြားထားပါတယ်။
Fig. radial bearing - roller bearings
'radial rolling bearing' အုပ်စုမှ 'roller bearings' တွေမှာ၊ cylindrical roller bearing, tapered roller bearing နဲ့ spherical roller bearing တို့ပါဝင်ပြီး၊ roller bearing တွေကို single row နဲ့ double row ဆိုပြီး ထပ်မံခွဲခြားပါတယ်။
'thrust rolling bearing' အုပ်စုကို၊ thrust ball bearing နဲ့ thrust roller bearing ဆိုပြီး၊ ထပ်မံခွဲခြားပါတယ်။ thrust bearing အုပ်စုမှ 'thrust ball bearing' တွေမှာ single direction thrust ball bearing နဲ့ double direction thrust ball bearing တို့ပါဝင်ပါတယ်။ thrust bearing အုပ်စုမှ 'thrust roller bearing' တွေမှာ cylindrical roller thrust bearing နဲ့ spherical roller thrust bearing တို့ပါဝင် ပါတယ်။
Fig. thrust rolling bearings
radial rolling bearings တွေမှာရေးသားထားတဲ့ နံပါတ်တွေဖြင့်၊ bearing အမျိုးအစားကို ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ radial bearing အုပ်စုမှာ၊ 60, 62, 64, 68, 69 နဲ့ 160 တို့ဖြင့် အစပြုတဲ့ နံပါတ်တွေဟာ၊ light duty single row deep groove ball bearings တွေဖြစ်ပြီး၊ 63 ဖြင့် အစပြုလျှင် medium duty single row deep groove ball bearing ဖြစ်ပါတယ်။ 72 နံပါတ်ဖြင့်၊ အစပြုခဲ့လျှင် light duty single row angular contact ball bearing ဖြစ်ပြီး၊ 73 နံပါတ်ဖြင့် စခဲ့လျှင်တော့ medium duty single row angular contact ball bearing ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ 12, 12 - - K, 22, 22 - - K စတဲ့ နံပါတ်များဖြင့်၊ အစပြုခဲ့လျှင် light duty double row self aligning ball bearing ဖြစ်ပြီး၊ 13, 13 - - K, 23, 23 - - K နံပါတ်များဖြင့်၊ စခဲ့လျှင်တော့ medium duty double row self aligning ball bearing ဖြစ်ပါတယ်။
N2, NU2, NJ2 နဲ့ NF2 ဆိုလျှင်တော့၊ light duty cylindrical roller bearing ဖြစ်ပြီး၊ N3, NU3, NJ3, NF3 နဲ့ NH3 တို့ကတော့ medium duty cylindrical roller bearing တို့ဖြစ်ပါတယ်။ 302, 322 နဲ့ 303, 323 စတဲ့နံပါတ်တွေဟာ၊ light နဲ့ medium duty tapered roller bearings တွေကို သတ်မှတ်ခေါါဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ 222, 222 - - K နဲ့ 223, 223 - - K ဆိုတဲ့ နံပါတ်တွေကလည်း၊ light နဲ့ medium duty spherical roller bearings တွေကို သတ်မှတ်ခေါါဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ NA49 ဆိုလျှင်တော့ needle roller bearing ဖြစ်ပြီး light duty အနေနဲ့သာ အသုံးပြုပါတယ်။
thrust ball bearing အုပ်စုမှာ 511, 512, 532, 532 - - U နဲ့ 513, 533, 533 - - U နံပါတ်တို့ဖြင့်၊ အစပြုခဲ့လျှင် light duty နဲ့ medium duty single direction thrust ball bearing တွေဖြစ်ပြီး၊ 522, 542, 542 - - U နဲ့ 523, 543, 543 - - U စတဲ့ နံပါတ်တို့ဖြင့်၊ အစပြုခဲ့လျှင် double direction thrust ball bearing တွေအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
bearing တွေမှာရေးသားထားတဲ့ နံပါတ်တွေရဲ့အဆုံးမှာ suffixes ဆိုတဲ့ အတိုကောက် အက္ခရာလေးတွေ ရေးထားပြီး၊ bearing ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံ type ကိုဖော်ပြပါတယ်။ no suffix အနေနဲ့ ဘာမှရေးမထားလျှင် open type bearing ဖြစ်ပြီး၊ Z ဆိုတဲ့ အက္ခရာဖြင့်၊ အဆုံးသတ်ခဲ့လျှင် one-side metal shielded အဖြစ်၊ တဖက်တည်းမှာသာ ဖုံးအုပ်ထားခြင်းနဲ့ ZZ ဆိုရင်တော့ နှစ်ဖက်စလုံး ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ two-side metal shielded bearing အဖြစ်၊ သိနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ N ဆိုတဲ့ အတိုကောက် အက္ခရာလေးပါလာခဲ့လျှင်၊ without snap ring groove သို့မဟုတ် circlip groove မပါဝင်တဲ့ bearing အဖြစ်၊ သိနိုင်ပြီး၊ NR ဆိုလျှင်တော့ circlip groove ပါတဲ့ bearing အဖြစ်၊ သိနိုင်ပါတယ်။ ZNR ဆိုလျှင် one-side metal shielded with snap ring လို့သိနိုင်သလို၊ LU သို့မဟုတ် RS ဆိုလျှင်၊ one-side rubber sealed bearing နဲ့ LLU သို့မဟုတ် 2RS ဆိုလျှင် two-side rubber sealed bearing ရယ်လို့ သိနိုင်ပါတယ်။
သဘေ်ာတွေမှာ အသုံးများတဲ့ bearing တွေရဲ့ brand တံဆိပ်တွေကတော့ 'SKF' ဆိုတဲ့ The Skefko Ball bearing Sweden, 'FAFNIR' ဆိုတဲ့ The Fafnir Bearing USA, 'HOFFMANN' ဆိုတဲ့ The Hoffmann Manufacturing England, 'FAG' ဆိုတဲ့ The Kugelfischer Geroge Schafer Germany, 'KOYO' ဆိုတဲ့ Koyo Seiko Japan, 'NTN' ဆိုတဲ့ The Toyo Bearing MFG Japan နဲ့ 'NSK' ဆိုတဲ့ Nippon Seiko KK Japan တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ mian manufacturer တွေကလည်း၊ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ suffixes ဆိုတဲ့ အတိုကောက် အက္ခရာလေးတွေကို၊ ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
SKF, FAG , NTN, NSK နဲ့ KOYO brand တံဆိပ် bearings တွေမှာ၊ Z = One-side shield, 2Z or ZZ = Two-side shield, N = without circlip groove, NR = with circlip groove, RS or LU or DU = one seal standard width bearing နဲ့ 2RS or LLU or DDU = two seals standard width bearing ရယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
FAFNIR brand တံဆိပ် bearing တွေမှာ၊ D = one side shield, DD = two side shield, G = with circlip groove, P = one seal standard width bearing နဲ့ PP = two seals standard width bearing လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
HOFFMANN brand တံဆိပ် bearing တွေမှာတော့၊ P = one-side shield, PP = two-side shield, K = wihout circlip groove, KR = with circlip groove, RS = one seal standard width bearing နဲ့ RSS = two seals standard width bearing ရယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
Reference and image credit to : http://www.nskamericas.com, http://simplybearings.co.uk, http://www.wcnmarket.com, http://www.bestpricebearing.com, http://www.thrust-bearing.com, http://www.nsk.com,
Posted by ကိုထွန်း at 02:09
Charles Lembcke 26 May 2013 at 18:27